Best Roach egbu egbu: The Complete Guide To Elimining Coroaches - Nyocha Nyocha
Best Roach egbu egbu: The Complete Guide To Elimining Coroaches
Ofdị Ndị Roach Killers
Roach ntụ ntụ
Ndị Roach Growth Regulators
Ruo zọ Ha Aaa Ka Ha Ruru Eru?
Nyocha Of The Best Roach egbu egbu Nhọrọ
Best Roach Bait - Gel
Best Roach Bait - Mbadamba
Best Roach Bait ọdụ
Best Roach Afia
Best Roach raygba - Igbu
Best Roach raygba - Mgbochi
Best Roach ntụ ntụ
Kasị Mma ahụhụ na-achịkwa
Nhọrọ Ndị Ọzọ Dị Mma
Kedu ihe kacha mma roach na-egbu n'ahịa? Anyị ga-aza ajụjụ a taa, amakwaara m na ọ bụ nke siri ike!
Onweghi onye choro ichota ochicha eriwo ulo ha. Ha nọ ebe niile n’obodo mepere emepe. Garages, pantries, kọbọd, n'azụ kichin akụrụngwa… enweghị ebe dị mma. Ha na-asọ oyi.
Ma ị jiri igwe nri roach kacha mma ma ọ bụ nke kachasị mma roach, ihe niile dị mkpa bụ na ọ dị ire. Ya mere, taa, anyị ga-agbaji ụzọ dị iche iche nke igbu ọchịcha, m ga-enyere gị aka ịchọta nhọrọ kachasị mma dị ugbu a!
Ndị ohi kacha mma na ahịa:
Gel Roach Bait: Vendetta Roach Gel
Mbadamba ụrọ Bait: Harris HRT-4 Egwu & Silverfish egbu egbu
Roach Bait Station: Ọgụ Large & Obere Roach Bait Stations
Roach Trap: Black Flag TAT Roach Motel Afia
Igbu Roach raygba: Bengal Chemical Roach
Mgbochi Roach raygba: Mmụọ ọjọọ WP Ahụhụ
Ntụ ntụ: Zap-A-Roach Boric Acid Roach & ndanda na-egbu egbu
Roach Utochi onye mmegide: Gentrol Point Isi Iyi
Nhọrọ Ndị Ọzọ Dị Mma:
Raid Max ndanda & Roach raygba
Martin’s Insect Growth Regulator Na-etinye Uche
E nwere ọtụtụ ụdị ogbe ọchịcha na ahịa. Offọdụ n'ime ha na-agwakọta ma dakọtara site na ngalaba ndị dị n'okpuru, na-agwakọta ụdị dị iche iche n'otu otu. Ndị ọzọ na-anọ naanị ha. Nke a bụ ndepụta dị mkpirikpi nke ụzọ dị iche iche na otu ha si arụ ọrụ.
Dị na mbadamba na gel ụdị, roach baits bụ a nkịtị usoro nke igbu ọchịcha. Ihe kachasị mma maka rout maka iji eme ihe n'èzí bụ mbadamba mbadamba, ebe gel na-arụ ọrụ nke ọma n'ime ụlọ.
Roach baits na-arụ ọrụ site na igbu oge nsị. Sì nke nri ahụ na-arahụ ụdọ ahụ nso, ebe ọ ga-eri nri ma weghachite ụfọdụ akwụ. Ite nri ahụ ji nke nta nke nta na-etolite n'ahụ ha ma na-emebi ha. Ọ na-anyụ anyụ na mkpofu ha.
Mgbe otu roach nwụrụ, ndị ọzọ adịghị mma. Ihi ụra nke ọzọ ka dị, tinyere nsị na anụ ube n'onwe ya ka na-egbu egbu. Otu ọgwụ idide azụ pụrụ igbu ọtụtụ narị ọchịcha.
Enwere ụfọdụ ndọghachi azụ, agbanyeghị.
Gel roach baits dị ukwuu mana ọ ga-asa na mmiri ozuzo ma ọ bụ ọnọdụ mmiri. Ekpuchiri ụlọ ọrụ gel baiti nwere ike ịrụ ọrụ n'èzí na ihu igwe na-abụghị mmiri, dị ka mbadamba
Kwesịrị ịhapụ anụ ụlọ na ụmụaka pụọ ​​na nri nri. Ezie na e nwere nsụgharị nke na-ekwu na ọ dị mma, ị chọghị ịchọpụta ụzọ siri ike nke gị abụghị!
Na mbu, ihe ura nke roach nwere ike ime ka o buru gi ka ichoro ichoro ka ichoro. Ha na-adọta ọchịcha si n'ọtụtụ ebe na-esi ísì ụtọ. Ọkụ ndị agbata obi onye agbata obi gị nwere ike ịga leta maka nri!
N'ime oge nsogbu ahụ na-ebelata. Ọ nwere ike iwe obere oge, mana mmadụ niile ga-enwe obi ụtọ.
N'ikpeazụ, otu ụyọkọ ọchịagha nwere ike iwulite nsogbu ka oge na-aga ịba ahụ ị na-eji, yabụ na ị ga-agbanwe n'etiti ụdị di na nwunye. Chingmafe baits ọ bụla 3 ọnwa na-abụkarị gị kasị dịrị nchebe nzọ.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ọnyà roach bụ ọnyà gluu. Ndị a ga-ejide ọchịcha nke na-anwa ịmegharị ma ọ bụ gafee ha, na-agbada ha na ngwugwu nke ihe nnyapade ebe ha ga-egbu onwe ha.
Ndị a abụghị nhọrọ kachasị mma igbu egbu na aka ha, mana ha dị egwu na njikọ ndị ọzọ.
Kedu ụdị ọnyà roach bụ n'ezie, ọ dị mma na ịme bụ ịchọpụta ọnọdụ nsogbu gị. Ọ bụrụ na ị na-etinye ọnyà roach gburugburu ụlọ gị ma otu na-ejupụta ngwa ngwa, nsogbu gị nwere ike isi na mpaghara ahụ.
Ọ dị mkpa ịghọta na mgbe roach afia dị ukwuu na-enyere gị aka ịmata kpọmkwem hotspot roach ebe, ha na-ebelata irè nke baits. Ọ bụrụ na ụgbụ ejide ọnyà, ọ gaghị enwe ike ịdaba n'ụlọ wee merụọ ndị fọdụrụ na mpaghara ahụ.
esi neutralize nitrogen na ala
A roach ịgba bụ irè ngwaahịa ma ọ bụrụ na ị pụrụ ịhụ roach nri n'ihu gị na nwere ịgba n'aka. Ma gịnị banyere igbochi ha?
Enwere uzo abuo nke roach sprays ndi eji eme ihe n’oge a - roach killers na roach mgbochi.
Ihe kacha mma roach ịgba kwesịrị ikpokọta akụkụ nke abụọ. Ọ kwesịrị igbu pesti site n'inweta na ha, mana ọ ga-abụkwa ihe mgbochi iji gbochie ọchịcha n'ọdịnihu abanye na mpaghara ahụ.
A, a roach ịgba naanị nwere mmetụta na roaches onye na-eme kpọmkwem na kọntaktị na ịgba ma ọ bụ na ịgba mmiri. Nke a pụtara na ị na-enwekarị ọtụtụ ihe ị zoro ezo na ebe ọzọ nke ị nwere ike ịmaghị.
Iji otutu usoro nke njikwa na-abụkarị ụzọ kacha mma.
Imirikiti ntụ ntụ roach na ahịa nwere boric acid. Nsi ọkụ a kachasị dị irè mgbe ọ nọ n'ọnọdụ ebe ọchịcha ga-agabiga ntụ ntụ. Ọ naghị arụ ọrụ mgbe ọ dị mmiri mmiri, ọ nweghịkwa nchekwa na ụmụaka ma ọ bụ anụ ụlọ.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịnweghị obere ụmụaka ma ọ bụ anụ ụlọ ị na-alụ ọgụ, ị nwere ike ịchọpụta na boric acid bụ nhọrọ dị ukwuu. Na-enweghị isi, ọ na-enye mgbochi mgbochi na-adịgide adịgide n'ime ime ụlọ nke ụgbọala ma ọ bụ patio.
N'ime ụlọ enwere ike iji ya mee ihe, ọ na-adị irè mgbe a na-ekpocha ya nke ọma n'ime mgbape na mbadamba ala ma ọ bụ mgbidi.
N'ikpeazụ, anyị nwere ndị na-achịkwa uto. Ngwaahịa ndị a na-egbochi usoro ịmị akwa, na-ahụ na ọchịcha agaghị emepụta ọgbọ na-abịa n'ihu.
Ọ bụ ezie na ndị a na nke ha abụghị ndị ohi roach, ha na-ahụ na enwere ọtụtụ ọchịcha dị mkpa iji ụzọ ndị ọzọ gbuo.
Chọpụta ihe dị mma igbu ọchịcha ezughị. Chọrọ ihe ga-adị irè na ọrụ ahụ.
N'ime nhọrọ niile m na-ekpuchi taa, nke kachasị dị irè na-abụ gel baits. Ha dịkarịrị mma mgbe ha jikọtara ya na ndị na-achịkwa uto.
Otú ọ dị, dị ka e kwuru na mbụ, ọchịcha nwere ike ịmepụta ihe na-egbochi gel baits. Ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa maka egbu egbu roach kacha mma, ị ga-achọ ijikọta ọtụtụ nhọrọ maka mkpuchi kacha mma.
otú e si wuo oyi etiti si pallets
Jiri gel bait na onye na-ahụ maka ịba ụba roach n'ime, jikọtara ya na ihe mgbochi ụdị ihe ịkpa oke n'akụkụ isi ihe. Nchikota a na - adi irè.
Ọ dịghị egbu egbu roach ga-adị irè ma ọ bụrụ na itinyeghị mgbanwe ụfọdụ na gburugburu ebe obibi. Ọ bụrụ na ọchịcha na-agagharị n'ime ụlọ, a ga-enwerịrị ihe kpatara ya!
N'ozuzu, ihe kpatara ya bụ isi nweta nri dị mfe. Gbaa mbọ hụ na enweghị ụlọ nri ọ bụla ma ọ bụ mmiri ọ bụla nwere ike ịta ụta n'ụlọ gị. Debe ya ọcha, ọ ga-abụ na ha agaghị enwe ike ịwakpo ya.
Iji ihe na-egbu ahụhụ nwere ike ịba uru.
E nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa pest ultrasonic ndị dị n'ahịa ugbu a. Ọ bụ ezie na ha na-ere ahịa iji jikwaa ọtụtụ pests gụnyere oke na anwụnta , ọtụtụ na-azọrọ na ha na-akụda ọchịcha.
N'ezie ọ gaghị afụ ụfụ ijikọ izugbe ultrasonic na-ajụ ihe na ụzọ ndị ọzọ. I nwedịrị ike iwepụ ahụhụ ndị ọzọ!
Nke kacha mma roach sịga nwere Veneetta megide pests. Ma ọ bụ, na nke a, ọ bụ Vendetta.
Kachasị dị irè, Vendetta nwere isi na-atọ ụtọ nke na-adọrọ adọrọ ma ọ bụ obere ihe na ụmụ mmadụ. Ndị ọchịagha na-ahụ ya agụụ, na n’ime oge, ha niile anwụọla.
Mgbe ejikọtara ya na ihe nchịkwa ụmụ ahụhụ dị ka Gentrol, ngwakọta a na-egbu egbu. Onye na - achịkwa uto na - akwụsị ọchịcha ịmụ ụmụ, ma jiri nwayọ nwụọ na Vendetta.
Inwe Vendetta abughi ihe dị mma!
Ọ bụrụ na ịchọrọ naanị otu nhọrọ maka igbu ọchịcha, nke a bụ nke ị ga-ahọrọ.
Harris HRT-4 Egwu & Silverfish egbu egbu
Mbadamba Harris, Boric Acid Roach Killer na Lure (4oz, Mbadamba 96)
Nnukwu Uru - Obere nke mbadamba 96 gụnyere ...
EPA edebanyere aha - Ndebanye aha ya na gburugburu ebe obibi ...
Enweghi ike iguzogide ọchịcha - ihe na-arụ ọrụ 40% ...
Boric acid anọwo na-abụ ọkọlọtọ maka igbu ọchịcha, ụdị mbadamba ụrọ mbadamba ụrọ a na-ejikwa ya eme ihe nke ukwuu.
Harris roach nri idide nwere ike iji ya dum n'ụdị ya dị ka mbadamba ụdị dị n'okpuru arịa ma ọ bụ tinye ya n'ime ụlọ. Ọ bụrụ na etinyere ya n'ime ntụ na-adịghị ike, enwere ike ịkwanye ya n'okpuru ebe a na-akụda ya ma mechie ya.
Ọ bụ ezie na ọ naghị adọrọ mmasị ụfọdụ ọchịcha karịa gel, iji nke a na gburugburu ebe dị ọcha dị mma na-abụkarị aghụghọ. Styledị egbu egbu a na-arụ ọrụ nwayọ nwayọ karịa ụdị ndị ọzọ, ma kwesiri ijikọta ya na onye na-eto eto ahụhụ maka nsonaazụ kacha mma.
Maka nri ụrọ nke mbadamba, nke a bụ ihe kacha mma roach ị nwere ike ịzụta, ọ dịkwa mma ego ahụ.
Ọgụ Large & Obere Roach Bait Stations
Ọgụ Large na Obere ọchịcha-egbu Bait Stations, 12 Gụọ (mkpọ nke 2) Total 24 azụ azụ Stations
Ngwunye nke 2, nke ọ bụla bụ ọnụ ọgụgụ iri abụọ na abụọ, ngụkọta 24 Bait ...
Na-egbu obere ọchịcha. Na-egbu ọchịcha na ...
Ọchịagha ịkekọrịta nri azụ, na-egbu ọchịcha ndị ọzọ na ...
Adịghị m nnukwu ofufe nke ụlọ ọrụ nri azụ jupụtara na mbụ. Gels na-arụ ọrụ dị irè karị. Ma n’ihe banyere ọdụ ụgbọ mmiri Combat roach a, m ga-eme otu.
Maka ezigbo nhọrọ dị na ọtụtụ ụlọ ahịa, nke a na-arụ ọrụ ihe ịtụnanya nke ọma. N'ezie, ndị a nwere ike ịmalite iwepụ ọchịcha mgbe ị na-eche ka ngwugwu gị nke Vendetta bịarute.
Ana m akwado ịkwado ha site na iji Vendetta ma ọ bụ ngwaahịa ọzọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu nsogbu roach. Ma mgbe ihe niile kwuru ma mee, ụlọ ọrụ ndị a na-alụso ọgụ na-arụ ọrụ nke ọma na ha kwesịrị ka a kpọtụrụ aha ebe a.
Black Flag TAT Roach Motel Afia
Black Flag TAT Roach Motel Traps, 2-count packages (mkpọ nke 6)
Nwere 2 Afia
Eji Ogwu Ogwu Ogwu Ogwu Okaan̄-ene ...
Ọzọkwa, akara a ma ama na-emeri! Ihe ọnyà Black Flag roach na-enye bụ ụzọ dị ngwa, dị mfe, kọmpat na unobtrusive iji jide ọchịzụ. Obere igbe ahụ adịghị ka ihe jọgburu onwe ya, ọ dịkwa mfe ikpofu.
Agbanyeghị, ekwesịrị m ikwughachi na iji ọnyà roach kachasị mma dị ka usoro iji chọpụta ebe kachasị njọ. Idebe ihe ndị a kwesịrị ịbụ ihe mbụ ị ga-eme. Ozugbo ịchọtara ebe ọtụtụ ọchịcha gị na-anọ, dobe gel bait na mpaghara ahụ, yana onye na-egbochi uto.
Mana m n’eche n’ezie na n’ihi na gluu e ji eme ihe nwere ọnya ọkụ, Black Flag’s roach motel bụ otu n’ime ọnyà roach kacha mma ị nwere ike ịzụta. Kpamkpam kwesiri ego ejiri.
Bengal Chemical Roach
Ọrịre Bengal Chemical 92465 Roach II, 9 oz
Na-egbu ọchịcha, Crickets, Spiders, Silverfish & ...
Ee, ndị na-ewu ewu azụmahịa ụdị nke roach ịgba arụ ọrụ. Ma Bengal roach ịgba na-arụ ọrụ ntakịrị mma.
Ihe Bengal nwere ike ịnye gị na ụdị ndị ọzọ enweghị ike ịbụ ogologo ndụ. Ọ bụ ihe nkedo na-eme ka ọnụọgụ dị irè, na-ebibi ọ bụla roach ọ na-emetụ. Ma mgbe akpọnwụ, ịgba ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị ka ihe mgbochi ma ọ bụ mgbochi mgbochi maka ọnwa anọ n'ime ụlọ.
Kpachara anya, nke a bụ ihe dị ike. Ekwadoro m inwe ikuku na mpaghara ebe ị na-agba ya, ma ọ bụ iyi ihe nkpuchi mgbe ị na-agba ya. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dị irè n'ezie, Bengal Chemical Roach bụ ihe kachasị mma roach ị nwere ike inweta.
Mmụọ ọjọọ WP Ahụhụ
Ọrịre Syngenta - H-AP-2319890 - Demon WP Insecicide, 1 Envelopu (9.5g) nwere 4 (0.33 ounces) ngwugwu
Nọmba na ngwugwu abụghị ụbọchị njedebe
Maka iji ya n'ozuzu ya, ịgbawa na ịgbawa ...
Chọrọ mgbochi ịcha akwa mgbochi nke ga-arụ ọrụ n'ime na n'èzí?
Mmụọ ọjọọ WP-abịa dị ka a kemfe ntụ ntụ na ị nanị igbari na mmiri na a sprayer ite. Ozugbo emechara ka ọ jikọta n'ụzọ zuru ezu, ọ na-adị mfe ịgbagha ebe ọ bụla ọ dị mkpa. Ma ịkwesighi ịmebe ogbe oge niile. Otu ngwa ga-eru ọnwa atọ.
Nke a roach spray emepụta ihe mgbochi nke ga-eme roaches, spiders, na ọtụtụ nke pests nkịtị n'ọnụ mmiri. Gbachapu gburugburu gburugburu ụlọ gị na-egbochi ọchịcha ịgagharị, nke na-ebelata ohere ị ga-achọpụta na kichin.
Enwere ike iji ya n'ime ụlọ yana, ọ bụ ezie na ị ga-achọ ịkpachara anya. Ngwa ngwa gbara ọchịchịrị ma ọ bụ arịa ụlọ nwere ike imetọ ngwaahịa a, yabụ kpachara anya mgbe ị na-etinye akwụkwọ.
N'ihi na a mgbochi ụfọdụ, nke a bụ ihe kasị mma roach ịgba ị pụrụ ịchọta, m ukwuu nwere ike ikwu na ọ!
Zap-A-Roach Boric Acid Roach & ndanda na-egbu egbu
Achọghị iji sprays ma ọ bụ gels, na ịkwanye ụrọ mbadamba nkume bụ naanị ihe na-akpasu iwe. Bulie Zap-A-Roach, boric acid ntụ na-arụ ọrụ dịka ọnya roach na-arụ ọrụ.
Enwere ike ịrụ ọrụ ntụ a n'ime oghere dị na ime ụlọ osisi siri ike, n'ime oghere siri ike ma sie ike iru, yana n'okpuru arịa. Ọnụ ego dị nnọọ ntakịrị bụ ihe achọrọ iji rụọ ọrụ.
Dị ka mbadamba Harris ndị a kpọtụrụ aha na mbụ, a na-eme Zap-A-Roach site na boric acid, nke bụ oge a nwalere ma nwapụta ụzọ iji kpochapụ ọchịcha yana ọtụtụ ụmụ ahụhụ ndị ọzọ. Echere m na ọ bụ roach roach kacha mma maka ọtụtụ ebumnuche, ọ dịkwa oke ọnụ ahịa.
esi tufuo odo odo ahihia na ahihia
Gentrol Point Isi Iyi
Gentrol Point Isi Iyi IGR ZOE1007
Roaches na echekwara ngwaahịa pests
Maka ebe anaghị anabata spraying
Jiri ya na: Nhazi njikwa nri, ndị nọọsụ ...
Nnọọ mfe iji, Gentrol Point Source bụ usoro nzọụkwụ abụọ. Naanị ịpịpịa akpa ahụ ka ị mepee ngwugwu ihe nchịkwa n'ime, wee tinye ya na mpaghara na-agagharị agagharị.
Site ebe ahụ, Gentrol ga-eme ihe dịka nri idide, belụsọ na ọ naghị egbu ọchịcha kpam kpam. Kama, ọ na-agbanwe usoro ndụ ha. Ndị okenye na-eri Gentrol enweghị ike ịmị akwa, ma ọ bụ mepụta akwa ndị jupụtara na ọchịcha na-adịghị ọcha. Nwatakịrị na-enweghị ume agaghị eburu ụdị ha.
Na nchikota ya na ezigbo gel ma ọ bụ ịgba, Gentrol ga-ewepụ nsogbu roach kpamkpam. Ọ ga-arụ ọrụ otu aka ahụ n'onwe ya, mana ọ ga-ewe ogologo oge ka ọ ghara ịdị irè n'ụzọ ahụ.
Otu isi Capsule ga-adịgide ruo ọnwa asaa nke mkpuchi. M na-ejikarị edochi nke m ugboro abụọ n'afọ, naanị ka ọ nọrọ n'akụkụ nchekwa. Ọ bụ ezigbo ego ga - eme ka ị ghara ịba ọghọm n’ọdịnihu!
N'ịbụ nke a ma ama, Advion roach bait na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ Vendetta na-arụ. Tinye obere dab nke a na mpaghara ogbe-roach, ha gha aputa ya.
Ọ nwere usoro dị iche iche karịa Vendetta, nke bụ ihe dị mma. M n'ezie na-atụle Advion dị ka Vendetta, na ọ bụ mkpebi siri ike buru n'etiti abụọ maka nke kacha mma roach nri.
Otú ọ dị, dị ka ọchịcha nwere ike iru a ndidi ka dị iche iche sịga ụdị, iche iche abụghị ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na nsogbu nsogbu gị ka dị ka ọnwa 2-3 nke iji Vendetta, gbanwee gaa na ndụmọdụ iji kpochapụ ihe fọdụrụnụ. Ghagharị azụ na azụ ga-eme ka ị ghara inwe nsogbu nsogbu ọzọ.
Trapper Max gluu ọnyà
Nonzọ dị egwu nke na-anaghị egbu egbu iji nweta òké na ...
Ihe mkpuchi kpuchiri elu 4.5'X 6.5 '(The ...
Enwere ike iji ya dị ka mbadamba ma ọ bụ apịaji ma debe ebe ...
Ọ bụrụ n’inweela Vendetta ma ọ bụ ụgbụ roach ọzọ n’aka gị nke ị maara na ọ na-arụ ọrụ, ma na-anwa ịtọlite ​​ebe ụmụ ahụhụ na-abịa, bulie ọnya ọnya Trapper Max.
Ọnyà ndị a bụ ọnyà gluu nke nwere ike ijide ihe niile site na oke ruo roaches, crickets, na ndị ọzọ. Ihe nrapado siri ike nke ukwuu, ha dịkwa mfe iwepụ. Ezoro n'otu akụkụ, nke a bụ nhọrọ dị irè iji chọta gburugburu ebe roach akwu.
Ọrịre Raid Max Ant na Roach Spray, 14.5 OZ
Roach Spray na-egbu chinchi na kọntaktị ma debe ...
Na-egbu Ants, Crickets, Roaches, Silverfish, ...
Anyị abụọ ụzọ roach ịgba enyere gị aka itinye ịgba na ...
Ah, wakporo. Ọ bụ akara ama ama, na anyị niile ahụla mkpọsa azụmahịa na ụmụ ahụhụ na-eti mkpu na ụjọ. Mana otutu ndi mmadu na achota ihe ndi ozo Raid adighi aru oru dika ha choro olile anya.
Otú ọ dị, ọ dịkarịa ala otu na-eme. Raid Max bụ oke nhọrọ maka ịtụtụrụ na ụlọ ahịa nnukwu igbe kachasị amasị gị. Ọ gaghị adịte aka dị ka Bengal ma ọ bụ Demon WP ga-anọ, naanị na-egbu oge ihe dị ka otu ọnwa. Mana dịka nhọrọ dị mfe ịchọta, ọ bụ nhọrọ dị mma.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe kacha mma roach spray ozugbo na nkeji a, na enweghị ike ichere maka ngwugwu ị ga-abata, tụlee ngwaahịa Raid a. Mana ana m akwado ịnye iwu ọnya ndị ahụ ka Raid dries!
ebe ịzụta ọka nri nri ọka maka ahịhịa
Ngwọta Njikwa 82005202 I. G Inye Ọchịchị Na-ahụ Maka Ọkụ, Yellow
Maka ire Site PestcontrolPros Lee Pestcontrolpros ...
Ngwaọrụ na-arụ ọrụ: 1.3% Nylar Target Pests: Fleas, ...
Ngwa: n'ime na n'èzí. Soro akara ...
Gwakọta nke a dị ka ntụziaka nke ndị na-emepụta, na Martin bụ onye na-achịkwa uto nke ụmụ ahụhụ dị oke irè.
Ọ bụrụ na ị nwere obere ụmụaka ma ọ bụ anụ ụlọ, nke a nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma gị, ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe ha nwere ike ịta. Ozugbo akpọnwụrụ ya, naanị ihe ọ na-emerụ bụ ahụhụ na-egbu egbu. Ọkụ, flea, anwụnta, na ụmụ ahụhụ ndị ọzọ agaghị ewepụta ọgbọ ga-abịa n’ọdịnihu.
Ọ bụ ezie na m na-ahọrọ Gentrol ka ọ na-ekpuchi onwe ya ma na-atụba ya ngwa ngwa ma dochie ya, njedebe nke nhọrọ a bụ na otu karama na-aga n'ụzọ dị oke anya. Otú ọ dị, ọ kachasị mma izere iji nke a na pantiri gị ma ọ bụ n'akụkụ ngwaahịa nri echekwara.
Njikere ikpochapu ọchịcha? Jikọtara ụzọ abụọ ndị a ga - eme ka ị ghara inwe ọhụụ maka ọdịnihu. Ma ọ nwere ike wepụta ụmụ ahụhụ ndị ọzọ na-efe efe, kwa!
Have nwere nhọrọ roach egbu ọzọ nke m na-ekwutụbeghị nke ị ji? Gwa m ala n'okpuru ihe a!
ihe dị na ọrụ ebube too fatịlaịza
1000 watt elu sodium ọkụ
esi echekwa tomato osisi maka akuku na-esote afọ
kacha mma na-eto eto tent maka ego